Sida loo ogaado in kumbiyuutarkaygu yahay 32 ama 64 bits - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 30/05/2022 09:27 | La cusbooneysiiyay 31/05/2022 08:34 | Tababarada
Ka soo qaad in aad hadda soo iibsatay barnaamij naqshadeed oo weyn. Waxa aad doonaysaa in aad ku rakibto kombayutarkaga oo marka aad hubiso shuruudaha aad ogaanayso in uu ku rakibayo processor-ka 64-bit ah. 64? Oo aad ka adkaato. Sideen ku ogaan karaa in kombayutarkaygu yahay 32 ama 64 bits? Maxay ku kala duwan yihiin iyaga?
Haddii aad sidoo kale marar badan is weydiisay su'aashaas oo aanad weli garanayn, Waxaan ku bari doonaa sida loo helo xogtan, haddii aad leedahay Windows, Linux ama Mac. Aan u gaadhno?
1 Waa maxay macnaha 32 ama 64-bit processor?
2 Sida loo ogaado in kombayutarkaygu yahay 32 ama 64 bits
2.1 Sida loo ogaado in kombuyuutarku ku jiro 32 ama 64 bits gudaha Windows
2.2 Sida loo ogaado in kombuyuutarku ku jiro Linux 32 ama 64
2.3 32 ama 64-bit oo ku yaal Mac
Waa maxay macnaha 32 ama 64-bit processor?
Sidaad ogtahay, Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee kombiyuutarku waa CPU. maxaa yeelay waxa aad mooddaa in ay tahay maskaxda oo wax walba xakamaynaysa. Midkanna wuxuu ku shaqeeyaa xoogaa yar. Laakiin waxay taageeri kartaa 32 ama 64. Tani waxay mar hore ku xiran tahay arrimo kale.
Jaleecada hore, aqoon la'aan, waxaad odhan kartaa processor-ka 64-bit ah wuxuu had iyo jeer ka fiicnaan doonaa mid 32-bit ah. Runtuna waxay tahay inaadan khaldamin.
Runtii tirooyinkan waxay la xiriiraan awoodda kombuyuutarkaaga inuu ka shaqeeyo in ka badan ama ka yar xogta. Si aad fikrad ku siiso, haddii CPU-gaagu yahay 32-bits, markaa waxay la macno tahay inay awood u yeelan doonto inay socodsiiso qiyaastii 4.294.967.296 qiimayaal suurtagal ah. Taa beddelkeeda, haddii ay tahay 64-bit, waxay yeelan doontaa 18.446.744.073.709.551.616. Farqiga, sida aad arki karto, aad buu u sarreeyaa, taasina waxay ka dhigaysaa qaar badan inay door bidaan kombuyuutar 64-bit ah oo ka sarreeya 32-bit.
Dhanka kale, marka CPU-gu yahay 32-bit, markaa waxay isticmaali kartaa kaliya 4 GB ee RAM. Oo haddii ay tahay 64-bit, waxaad awoodi doontaa inaad ku riixdo xadkaas ilaa 16GB ee RAM.
Waa maxay tan macnaheedu?
Kaas oo yeelan doona wax badan ama ka yar awood si loo habeeyo macluumaadka.
Waxaad heli doontaa wax ka badan ama ka yar.
Dhibaato yar ayaa ku soo gaadhaysa haddii kumbuyuutarku istaago sababtoo ah ma awoodo inay maamusho macluumaadka badan.
Maskaxda ku hay in da'du ay sidoo kale saameynayso. Ilaa 10-12 sano ku dhawaad ​​dhammaan kombiyuutarada la iibiyay waxay leeyihiin naqshad 64-bit ah. Laakiin waxaa jira qaar weli isticmaala 32-bit barnaamijyada leh kuwaas oo aan ku adkeynin inay haystaan ​​​​computer awood yar.
Marka laga reebo Apple, oo markii dambe ku bilaabatay 64 bits, dhammaan kuwa kale waxay mar hore u beddeleen inay bixiyaan kombiyuutaro awood leh oo degdeg ah.
Hadda oo aad leedahay saldhig oo aad ogtahay waxa aan ula jeedno 32 ama 64 bit processor, waa waqtigii lagu tusi lahaa sida aad xogtan uga heli karto kumbuyuutarkaaga.
Sidaa darteed, waa inaad ogaataa in Windows-ku aanu la mid ahayn lahaanshaha Mac ama Linux, sababtoo ah mid kasta oo ka mid ah nidaamka hawlgalka xogta waxay ku yaalaan meel ama meel kale. Laakin ha ka welwelin, waayo waxaan ku siinaynaa furayaasha dhammaantood si ay kuugu adkaato inaad hesho.
Sida loo ogaado in kombuyuutarku ku jiro 32 ama 64 bits gudaha Windows
Aan ku bilowno Daaqadaha kaas oo maanta laga bilaabo, weli waa kan ugu badan ee loo isticmaalo nidaamka hawlgalka. Sida aad ogtahay, hadda waxaa jira dhowr nooc, laga bilaabo Windows 7 ilaa Windows 11.
Tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo si aad u hesho xogta ugu fiican uguna kalsoon ee ku saabsan kombayutarkaaga iyo qaybaha uu leeyahay processor-ka waa kuwan soo socda:
Fur Windows File Explorer. Halkan tiirka saxda ah waa inaad tagtaa Kooxdaan. Marka aad tilmaanto, midig-guji (ka ilaali cursorka erayadaas) menu ayaa soo bixi doona.
Ku dhufo guryaha. Hadda waxaad geli doontaa shaashad cusub. Hel qaybta «Gacaliye» halkaasna waxaad ku garan doontaa processor-kaaga, astaantaada iyo moodelkaaga. Kadib sumad «Nooca nidaamka» waana meesha aad ka heli doonto haddii kombayutarkaagu yahay 32 ama 64 bits.
Hadda, Waxaa laga yaabaa inay dhacdo in kombuyuutarku kuu sheego inuu yahay 32 bits, run ahaantiina uu yahay 64. Sababtoo ah kombiyuutarada 64-bit ayaa had iyo jeer la socda kombiyuutarada 32-bit ah, mararka qaarkoodna xogta lagu soo celiyo tallaabooyinkii hore waa khalad.
Maxaa la sameeyaa haddaba? Laba jeeg. Waayo, waa inaan ku sii jirnaa tilaabadii hore ee ugu dambeysay.
Shaashada ay ina siinayso, waa inaan gujinaa «Dejinta nidaamka sare" Taasi waxay ku siin doontaa shaashad yar oo leh tabsyo badan.
In the Advanced Options, dhamaadka, ku dhufo «Vdoorsoomayaasha deegaanka…» Halkan waxa ay na siin doontaa daaqad cusub oo waa in aan raadin «PROCESSOR_ARCHITECTURE«.
Oo halkan waxaa imanaya furaha: Haddii ay ku dhejiso AMD64 waa in aad leedahay kombiyuutar 64-bit ah. Laakiin Haddii ay leedahay AMD86 ama AMDx86, processor-kaagu waa 32-bit..
Sida loo ogaado in kombuyuutarku ku jiro Linux 32 ama 64
Haddii nidaamka qalliinka aad isticmaalayso uu yahay Linux, markaa tillaabooyinka kore kuuma shaqayn doonaan. Laakiin waxaad awoodi doontaa inaad hesho xogta si aad u fudud. Sidee?
1 Tallaabo: fur terminal. Waxaad hore u ogeyd in tani ay la mid tahay daaqadda MSDos.
2 Tallaabo: Ku qor amarka: iscpu oo ku dhufo gal Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo eraygaaga sirta ah. iyada sii
Tani waxay kaa heli doontaa qoraal yar shaashadda. Labada sadar ee hore waxay ku siin doontaa macluumaadka aad raadineyso. Oo wax la mid ah ayaa halkan ka dhacaya sida Windows. Haddii ay tiraahdo "CPU Operating modes 32-bit, 64-bit" waxay la macno tahay in kombuyuutarku yahay 64-bit. Laakiin haddii ay tiraahdo "32-bit CPU Operation Modes" markaa waa 32-bit oo kaliya.
32 ama 64-bit oo ku yaal Mac
Ugu dambeyntii, waxaan haynaa kiiska Mac. Runtu waxay tahay in dareenkan ay aad u fududahay in la helo xogta maadaama ay tahay inaad:
IRaac barkaaga shaqada iyo, meesha aad ku leedahay astaanta tufaaxa Mac, diiqad.
Hadda, waa inaad tilmaantaa "Ku saabsan Mac-kan" ama "Macluumaadka Nidaamka" Waxay kuu furi doontaa daaqad ay ku qoran tahay macluumaadka kombiyuutarkaaga oo waxaad ogaan doontaa magaca processor-kaaga. Daaqadda labaad, qaybta Hardware, waxay kuu ogolaan doontaa inaad hesho xog isku mid ah. Markaa waxaad ogaan kartaa inay tahay 32 ama 64 bits.
Markaa haddii aad waligaa la yaabtay sida loo ogaado in kombayutarkayga uu yahay 32 ama 64 bits, waxa aad haysataa jawaabta meel aad gaadhi karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Tababarada » Sida loo ogaado in kombayutarkaygu yahay 32 ama 64 bits